(tonga teto avy amin'ny Fiangonana)
Nanomboka tany amin'ny fotoana lazaina fa nilatsahan'ny Fanahy Masina tàmin'ny Apostoly sy nanombohany nitory ny filazantsara no azo lazaina fa nanombohan'ny fivavahana kristiana nefaahaleo tena ka tsy nikambana intsony tamin'ny fivavahana jiosy. Niely tany Asia Minora sy Eoropa atsimo ary amin'ny tapak'i Afrika avaratra ny fivavahana kristianina ka isan'ny nandray anjara betsaka i Paoly. Nisy ny fanenjehana ny Kristiana nataon'ireo Jiosy sy ny Romanina.
Taty aoriana dia lasa fivavaham-panjakana ny kristianisma ka i Roma no renivohitra tamin'izany. Nitombo hery ny Papa nefa nisy ny fiangonana sy mpanjaka na andriana izay nitady fahaleovan-tena ara-politika sy ara-pivavahana. Nampiforona ny Fanavaozam-piangonana (atao hoe koa Reforma na Reformasiona) izany.
Noho ny tokony hisian'ny filaminan'ny raharaha fehezin'ny Papa sy ny Eveka hafa rehetra sy ny tokony hananan'ny Fiangonana fampianaram-pinoana mitovy dia nisy matetika ny atao hoe konsily na sinoda izay fivoriana anasana ny eveka rehetra sy andraisany anjara. Ny emperora matetika no mamory. Maro ny fehin-kevitra nivoaka avy tamin'ireo konsily ireo ka isan'izany ny fanekem-pinoana sasany iraisan'ny fiangonana. Tamin'ny fotoana nampisy ireo konsily ireo koa no nisianan'ny fanenjehana mafy an'ireo atao hoe heretika na mpanao fampianaran-diso.
Noho ny tsy fifanarahana amin'ny lafiny teolojika sy hafa koa, na dia teo aza ny fanaovana konsily sy ny fomba hafa hisian'ny fitovian-kevitra na ny marimaritra iraisana, dia nivaky roa ny fivavahana kristiana ka i Roma sy i Konstantinopoly (na Konstantinopla) no lasa renivohitry ny fiangonana roa (dia ny Fiangonana tandrefana na Katolika romana sy ny Fiangonana tatsinanana na Ortodoksa).
Taorian'ny fanavaozam-piangonana (reformasiona na reforma) nataon-dry Lotera sy ny namany izay te hanitsy ny fanao sasantsasany tao amin'ny Fiangonana katolika dia niforona ny Protestantisma izay tsy niankina intsony tamin'ny Fiangonana katolika; avy eo taty aoriana dia niorina koa ireo fiangonana maro atao ankehitriny hoe evanjelika (na ara-pilazantsara) izay miezaka miparitaka eran-tany.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Kristianisma&oldid=993447"
Dernière modification le 8 Jiona 2020, à 12:39
Voaova farany tamin'ny 8 Jiona 2020 amin'ny 12:39 ity pejy ity.